Madaxweyne Biixi oo xafiiskiisa ku qaabilay wefti ka socda koonfur Afrika iyo shirkii golaha wasiirada oo warbixin laga soo saaray |
Hargeysa (SRTVLIVE) 07/02/2019
Shirkii golaha Wasiiradda Somaliland ayaa maanta warbixin lagaga dhegaystay Qaar Kamida Wasaaraddaha.
Shirkan golaha wasiirada waxa shirgudoominayey madaxweyne Muuse Biixi, waxaana ku wehelinayey madaxweyne ku xigeenka Saylici, waxaana warbiximo lagaga dhegeystay wasaaradaha Qorsheynta iyo horumarinta Qaranka Iyo Xannaanada Xoolaha & horumarinta Kalluumaysiga oo qorshe hawleedkooda ku soo bandhigay golaha.
Mashaariicdaas oo ahmiyad weyn siinaya siyaasadda xukuumadda ee ku salaysan wax-soo saarka, biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo waddooyinka. Sidoo kale wuxuu wasiirku xusay in sanduuqa horumarinta Somaliland ee (SDF) ay ku soo biirayaan dalal kale oo danaynaya inay qayb ka noqdaan sanduuqaasi, kuwaas oo ku qancay habka daah-furnaanta leh ee Somaliland u maamushay sanduuqa horumarinta Somaliland ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay madaxtooyada.
Dhinaca kale, Madaxweyne Biiixi, ayaa maanta kulan la yeeshay wefti ballaadhan oo ka socda xisbiga tallada dalka koonfur Afrika ee ANC.
Madaxweynaha iyo weftiga ka socda xisbul-xaakimka haya talada dalka Koonfur Afrika, ayaa ka wada-hadlay arrimo badan oo salka ku haya xoojinta xidhiidhka labada dal iyo labada xisbul xaakim ee KULMIYE iyo ANC ee Dalalka Somaliland iyo Koonfur Afrika.
Madaxweyne biixi, ayaa sidoo kale xubnaha weftiga ka socda xisbiga ANC waxa uu ka guddoomay salaan ay ka sideen madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, madaxweynaha Somalilandna waxa uu u diray salaan taa la mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika sida lagu sheegay war-saxaafadeed madaxtooyada ka soo baxay.